Momba ny fitiavana: eo anelanelan'ny fihetseham-po sy ny saina (tsanganana 22) - Raby Michael Avraham
Momba ny fitiavana: Eo anelanelan'ny fihetseham-po sy ny saina (Tsanganana 22)
16 hevitra	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 26 / 06 / 2019
Ao amin'ny ampahany Torah amin'ity herinandro ity (ary miangavy aho) ny parsha "Ary tiava an'i Jehovah Andriamanitrao" dia miseho avy amin'ny fanononana Shema, izay miresaka momba ny didy hoe tia an'i Jehovah. Rehefa nandre ilay antso aho androany, dia tsaroako ny sasany tamin’ireo eritreritra nananako taloha momba ny fitiavana amin’ny ankapobeny, ary indrindra ny fitiavana an’Andriamanitra, ary nanana hevitra vitsivitsy nohamafisina momba izany aho.
Eo anelanelan'ny fihetseham-po sy ny saina amin'ny fanapahan-kevitra
Rehefa nampianatra tao amin'ny yeshiva tao Yeruham aho, dia nisy mpianatra nanontany ahy momba ny fisafidianana namana, na hanaraka ny fihetseham-po (fo) na ny saina. Namaly azy ireo aho fa aorian'ny saina ihany, fa ny saina dia tokony handinika izay tsapan'ny fo (ny fifandraisana ara-pihetseham-po, ny simia, miaraka amin'ny mpiara-miasa) ho anisan'ny anton'ny fanapahan-keviny. Mila atao ao an-tsaina ny fanapahan-kevitra amin’ny lafiny rehetra, ary ny andraikitry ny fo dia ny mampiditra hevitra tokony hojerena fa tsy fanapahan-kevitra. Antony roa no mety mahatonga izany: ara-teknika ny iray. Mety hiteraka voka-dratsy ny fandehanana manaraka ny fo. Tsy ny fihetseham-po ihany no zava-dehibe indrindra amin'ilay raharaha. Ny saina dia voalanjalanja kokoa noho ny fo. Ny faharoa dia manan-danja. Rehefa manolotra ny reins ianao dia tsy tena manapa-kevitra. Ny fanapahan-kevitra amin'ny famaritana dia fihetsika ara-tsaina (na ny marimarina kokoa: an-tsitrapo), fa tsy fihetseham-po. Fanapahan-kevitra dia raisina amin'ny alalan'ny fitsarana am-po, fa ny fihetseham-po mipoitra ho azy fa tsy avy amin'ny fijeriko manokana. Raha ny marina, dia tsy fanapahan-kevitra mihitsy ny mandeha manaraka ny fo. Fisalasalana izany fa ny mamela ny toe-javatra hitarika anao hanaraka azy na aiza na aiza misy azy.
Hatreto aloha ny fiheverana fa na dia ao anatin’ny fo aza ny fitiavana, dia tsy resaka fitiavana fotsiny ny fisafidianana vady. Araka ny voalaza, ny fihetseham-po dia iray amin'ireo antony. Saingy heveriko fa tsy izany no sary manontolo. Na dia ny fitiavana aza dia tsy fihetseham-po fotsiny, ary mety tsy izany akory no zava-dehibe ao anatiny.
Amin'ny fitiavana sy ny faniriana
Rehefa niasa nandritra ny fito taona ho an’i Rahely Jakoba, dia hoy ny soratra masina: “Ary hisy andro vitsivitsy eo imasony amin’ny fitiavany azy.” ( Genesisy XNUMX:XNUMX ). Ny fanontaniana dia fantatra fa ity famaritana ity dia toa mifanohitra amin'ny traikefantsika mahazatra. Matetika rehefa misy olona tia olona iray na zavatra iray ka tsy maintsy miandry azy, dia toa mandrakizay ny androny. Fa eto anefa ilay andininy dia milaza fa ny fito taona nanompoany dia toa andro vitsivitsy ihany. Mifanohitra tanteraka amin'ny intuition-tsika izany. Hazavaina matetika fa izany dia satria i Rahely no tian’i Jakoba fa tsy ny tenany. Ny olona iray izay tia zavatra na olona iray ary maniry izany ho an'ny tenany manokana dia mametraka ny tenany ho eo afovoany. Ny tombontsoany no mitaky fahatanterahana, ka sarotra ho azy ny miandry mandra-pahazoany izany. Ny tenany no tiany fa tsy ny namany. Fa raha misy lehilahy tia ny namany ary ny zavatra nataony dia natao ho azy fa tsy ho azy, dia na dia taona maro ny asa toa vidiny kely.
Don Yehuda Abarbanel ao amin'ny bokiny Conversations on Love, ary koa ilay filozofa Espaniola, mpanao politika ary mpanao gazety Jose Ortega i Gast, ao amin'ny bokiny Five Essays on Love, dia manavaka ny fitiavana sy ny filan'ny nofo. Samy manazava izy ireo fa ny fitiavana dia fihetseham-po centrifugal, izay midika fa ny zana-tsipìkan'ny heriny dia mitodika any ivelany. Fa ny filan'ny nofo dia fihetseham-po mitsivalana, izany hoe ny zana-tsipìkan'ny hery dia mitodika avy any ivelany mankany aminy, ao anatiny. Amin'ny fitiavana dia izay ao afovoany no tiana, raha ao anatin'ny filan-dratsy kosa izay ao afovoany dia ilay tia (na filana, na filana). Te handresy na hahazo olon-tiana ho an'ny tenany izy. Ny amin'izany dia efa nilaza (eo, any) ny scout-tsika hoe: Ny mpanjono tia trondro? Eny. Koa nahoana izy no mihinana an'ireo?!
Ao amin’io teny io dia azo lazaina fa tia an’i Rahely i Jakoba ary tsy nitsiriritra an’i Rahely. Ny filan'ny nofo dia possessive, izany hoe ny filan'ny nofo dia te-hametraka zavatra hafa izay iriany, ka tsy afaka miandry ny hitrangan'izany izy. Toy ny mandrakizay ho azy ny andro rehetra. Fa ny olon-tiana dia te hanome ho an'ny hafa (ilay malala), ka tsy manelingelina azy ny miasa mandritra ny taona maro raha izany no ilaina amin'ny fanatanterahana izany.
Angamba azo ampiana refy hafa amin'io fanavahana io. Ny fanoharana angano momba ny fifohazan'ny fitiavana dia ny hazo fijalian'i Cupid miraikitra ao am-pon'ny olon-tiana. Ity fanoharana ity dia manondro ny fitiavana ho toy ny fihetseham-po mipoitra ao am-pon'ny olon-tiana noho ny antony ivelany. Tsy fanapahan-keviny na fitsarana izany. Saingy io famaritana io dia mifanaraka kokoa amin'ny filan'ny nofo fa tsy ny fitiavana. Ao amin'ny fitiavana dia misy zavatra manan-danja kokoa sy tsy dia misy dikany loatra. Na dia toa mipoitra avy amin’ny tenany aza tsy misy lalàna sy fitsipika ary tsy misy fahamalinana, dia mety ho fahamalinana miafina, na vokatry ny asa ara-tsaina sy ara-panahy izay nialoha ny fotoana nifohazany. Ny saina naoriko dia nifoha noho ny fomba namolavolako azy. Noho izany, ao amin'ny fitiavana, tsy toy ny filan'ny nofo, dia misy ny refin'ny fahamendrehana sy ny faniriana fa tsy ny fihetseham-po fotsiny izay mipoitra tsy miankina amiko.
Fitiavan’Andriamanitra: Fihetseham-po sy saina
Maimonides dia miresaka momba ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny toerana roa ao amin’ny bokiny. Ao amin'ny lalàna fototra ao amin'ny Torah no resahiny ny lalàn'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny teny avy amin'izany rehetra izany, ary ao amin'ny lalàn'ny fibebahana ihany koa dia averiny fohifohy izany (toy ny amin'ny lohahevitra hafa miverimberina ao amin'ny lalàn'ny fibebahana indray). Ao amin'ny fiandohan'ny toko fahafolo amin'ny Tesova, dia miresaka momba ny asan'ny Tompo ho an'ny anarany izy, ary ankoatra ny zavatra hafa dia nanoratra izy hoe:
A. Aoka tsy hisy hilaza fa manao ny didin'ny Torah aho ary mirotsaka amin'ny fahendreny mba hahazoako ny fitahiana rehetra voasoratra ao, na mba hahazoako ny fiainana any an-danitra, ary hialako amin'ny fandikan-dalàna izay nampitandreman'ny Torah. mba ho afa-mandositra Iry, izay manao toy izany, dia mpanao tahotra, fa tsy ny hatsaran'ny mpaminany, fa tsy ny hatsaran'ny olon-kendry, ary Andriamanitra tsy miasa toy izany, fa ny tompon-tany sy ny vehivavy. ary ny madinika manabe azy hiasa amin’ny tahotra mandra-pahamaro sy miasa amin’ny fitiavana.
B. Ny mpiasan’ny fitiavana dia miresaka Torah sy Matzah ary mandeha amin’ny lalan’ny fahendrena tsy manao na inona na inona eto amin’izao tontolo izao ary tsy matahotra ny ratsy ary tsy mandova ny tsara fa manao ny marina satria fahamarinana sy fiafaran’ny soa no ho avy. ny amin’izany, ary io hasina io dia hasina lehibe indrindra nitiavana Azy araka izay niasany fa tsy noho ny fitiavana ary ny hasina izay nitahian’ny Iray Masina tamin’i Mosesy no voalaza fa tia an’i Jehovah Andriamanitrao ianao, ary raha tia an'ny Tompo ny fitiavana sahaza ny lehilahy dia avy hatrany dia hanao ny matzah rehetra amin'ny fitiavana.
Maimonides, ao amin’ny teniny eto, dia mamaritra ny fifandraisan’ny asan’Andriamanitra sy ny anarany (izany hoe tsy noho ny tombontsoa ivelany) amin’ny fitiavana azy. Ambonin'izany, ao amin'ny Halacha XNUMX dia mamaritra ny fitiavan'Andriamanitra ho manao ny marina izy satria fahamarinana izany fa tsy noho ny antony hafa. Famaritana filôzôfika sy mangatsiatsiaka tokoa izany, ary manalavitra mihitsy aza. Tsy misy lafiny ara-pihetseham-po eto. Ny fitiavan’Andriamanitra dia ny manao ny marina satria Izy no fahamarinana, ary izany no izy. Izany no antony nanoratan'i Maimonides fa io fitiavana io dia ny hatsaran'ny hendry (fa tsy ny fihetseham-po). Izany no antsoina indraindray hoe “fitiavana ara-tsaina an’Andriamanitra”.
Ary eto, avy hatrany ao amin'ny halakhah manaraka dia manoratra ny mifanohitra tanteraka izy:
fahatelo. Ary ahoana ny fitiavana araka ny tokony ho izy dia ny hitiavany an'Andriamanitra dia fitiavana tena mifofofofo sy mivadi-po tokoa mandra-pahatongan'ny fanahiny ho voafatotry ny fitiavan'Andriamanitra ka diso foana ao anatin'izany toy ny marary amin'ny fitiavana izay tsy afaka amin'ny fitiavan'i Jehovah ny sainy. izany vehivavy izany sy izy dia diso foana amin'izany amin'ny Sabatany Avy amin'izany ny fitiavana an'Andriamanitra ao am-pon'ny olon-tiany dia ho diso mandrakariva araka ny nandidiana azy tamin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ary izany no nolazain'i Solomona tamin'ny fanoharana. fa mararin'ny fitiavana aho, ary ny hiran'ny fanoharana rehetra dia fanoharana momba izany.
Eto ny fitiavana dia mafana sy mampihetsi-po toy ny fitiavan'ny lehilahy ny vehivavy. Tahaka ny voalaza ao amin'ny tantara tsara indrindra, ary indrindra ao amin'ny Tonon-kira. Ny olon-tiana dia marary amin'ny fitiavana ary diso foana amin'izany. Tsy afaka hanelingelina azy na oviana na oviana izy.
Ahoana no ifandraisan'izany rehetra izany amin'ny sary ara-tsaina mangatsiaka voalaza ao amin'ny halakhah teo aloha? Very hevitra ve i Maimonides, sa hadinony izay nosoratany tao? Marihiko fa tsy fifanoherana hitanay teo amin’ny toerana roa samy hafa tao amin’ny asa sorany izany, na teo amin’i Maimonides sy izay voalaza ao amin’ny Talmoda. Misy lalàna roa mifanakaiky sy mifanesy eto izay miteny fiteny samy hafa tanteraka.
Heveriko fa tokony hitandrina eto ny tsy fahombiazan'ny tombom-barotra amin'ny decoding mifameno. Rehefa mitondra fanoharana ianao mba hanazavana zavatra iray dia mirakitra tsipiriany maro ny fanoharana fa tsy izy rehetra no mifandraika amin'ny hafatra sy ny fanoharana. Tokony hotadiavina ny hevi-dehibe nampianarin’ilay fanoharana, fa tsy tery loatra ny tsipiriany sisa ao anatiny. Heveriko fa ny fanoharana ao amin'ny Halacha XNUMX dia tonga milaza fa na dia ara-tsaina aza ny fitiavana an'Andriamanitra fa tsy ara-pihetseham-po, dia tokony ho diso hevitra foana izany ary tsy ho voarebirebin'ny fo. Ny fanoharana dia tonga mba hampianatra ny faharetan'ny fitiavana toy ny amin'ny fitiavan'ny lehilahy ny vehivavy, fa tsy voatery ho toetra ara-pihetseham-po amin'ny fitiavana romantika.
Ohatra amin'ny fibebahana, fanavotana ary famelan-keloka
Hiverina indray aho indray mandeha amin'ny fotoana mahafaly an'i Jerosalema. Raha tany aho dia nohatonin'ny lisea momba ny tontolo iainana ao Sde Boker ary nasaina niresaka tamin'ny mpianatra sy ny mpiasa nandritra ny Folo Andro Fibebahana momba ny Sorompanavotana, Famelan-keloka ary Famelan-keloka, fa tsy amin'ny resaka fivavahana. Nanomboka ny teniko tamin’ny fanontaniana napetrako tamin’izy ireo aho. Aoka hatao hoe i Robena no namely an’i Simona ka nalahelo ny feon’ny fieritreretany momba izany, ka nanapa-kevitra ny handeha hampionona azy. Mifona amin’ny fony lalina izy ary miangavy azy hamela ny helony. I Levy kosa dia namely an'i Shimon (mety ho lehiben'ny kilasy i Shimon), ary tsy nanenina tamin'izany izy. Tsy mampijaly azy ny fony, tsy manana fihetseham-po momba izany izy. Tena tsy miraharaha an'izany izy. Tsapany anefa fa nanao ratsy sy nandratra an’i Simona izy, ka nanapa-kevitra ny handeha hangataka famelan-keloka aminy koa izy. Tonga teo amin’i Simona nampalahelo ny anjely Gabriela ary nanambara taminy ny halalin’ny fon’i Robena sy Levy, na angamba i Simona mihitsy no nankasitraka fa izany no mitranga ao am-pon’i Robena sy Levy ao anatiny. Inona no tokony hataony? Ekenao ve ny fialan-tsiny nataon'i Robena? Ary ahoana ny momba ny fangatahan'i Levy? Iza amin'ireo fangatahana no mendrika ny famelan-keloka?
Tsy mahagaga raha tsy nitovy ny fihetsiky ny mpanatrika. Tena marina sy mendrika ny famelan-keloka ny fangatahan'i Reuven, saingy mihatsaravelatsihy i Levy ary tsy misy antony tokony hamelana azy. Tetsy ankilany anefa dia niady hevitra aho fa mifanohitra amin'ny hevitro ny zava-misy. Ny fialan-tsiny nataon’i Robena dia natao hamahana ny fijalian’ny feon’ny fieritreretany. Miasa ho an'ny tenany tokoa izy (mifototra amin'ny centrifugal), noho ny tombontsoany manokana (mba hampitony ny kibony sy ny fijalian'ny feon'ny fieritreretany). I Levy kosa dia manao fihetsika tena madio. Na dia tsy marary kibo na fo aza izy, dia tsapany fa nanao zavatra tsy mety izy ary adidiny ny mampitony an’i Simona naratra, ka manao izay takina aminy izy ary mangataka famelan-keloka aminy. Fihetseham-po mahery vaika izany, satria natao ho an'ny niharam-boina fa tsy ho an'ny tenany.
Na dia ao am-pony aza i Levy dia tsy mahatsapa na inona na inona, fa nahoana no zava-dehibe izany? Tsy mitovy amin’i Robena ny fanorenana azy io. Ny amygdalany (izay tompon'andraikitra amin'ny fiaraha-miory) dia simba ary noho izany dia tsy mandeha ara-dalàna ny foibem-pihetseham-pony. De maninona?! Ary ny firafitry ny olombelona dia tokony handray anjara amin'ny fiheverantsika ara-moraly azy? Mifanohitra amin'izany, io ratra io indrindra no ahafahany manao zavatra amin'ny fomba madio kokoa sy feno fitiavan-tena ary feno kokoa, noho ny amin'i Simona ihany, ka noho izany dia mendrika ny famelan-keloka izy.
Amin'ny lafiny iray hafa dia azo lazaina fa i Robena dia tena mihetsika noho ny fihetseham-pony, fa i Levy kosa dia manao izany noho ny fitsarany sy ny fitsarany manokana. Ny fankasitrahana ara-môraly dia tonga amin’ny olona iray noho ny fanapahan-keviny fa tsy noho ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po mipoitra na tsy mipoitra ao aminy.
Fihetseham-po noho ny antony na ny vokatr'izany
Tsy midika akory izany fa ny meloka na ny nenina dia tsy maintsy manafoana ny fitondran-tena amin'ny fihetsika na amin'ny olona. Raha mampitony an'i Shimon i Levy noho ny antony marina (centrifugal), nefa miaraka amin'izay dia mahatsapa ho meloka izy taorian'ny ratra nahazo azy, dia tanteraka sy madio tanteraka ilay fihetsika. Raha mbola tsy ny fihetseham-po no antony anaovany izany, izany hoe ny fisaronan’ny afo ao anatiny, fa ny fitondrana fanafody ho an’i Simona ory. Ny fisian'ny fihetseham-po, raha tsy izany no antony mahatonga ny fampihavanana, dia tsy tokony hanelingelina ny fanombanana ara-moraly sy ny fanekena ny fangatahana famelan-keloka. Ny olona ara-dalàna dia manana fihetseham-po toy izany (ny amygdala no tompon'andraikitra amin'izany), na tiany na tsia. Mazava araka izany fa tsy manakana ny fandraisana ny fangatahana izany. Fa indrindra noho io fihetseham-po io ihany koa dia tsy zava-dehibe eto, satria tsy manaraka ny fanapahan-kevitro no mipoitra fa ho azy (karazana instinct izany). Ny instinct dia tsy manondro ny fahamendrehana ara-moraly na ny tsy fahampiana. Ny fitondran-tenantsika dia voafaritra amin’ny fanapahan-kevitra raisintsika fa tsy amin’ny fihetseham-po na fihetseham-po mipoitra ao amintsika tsy voafehy. Ny lafiny ara-pihetseham-po dia tsy manelingelina fa noho ny antony mitovy ihany koa dia tsy zava-dehibe amin'ny fankasitrahana ara-moraly. Ny fisian'ny fihetseham-po dia heverina ho tsy miandany eo amin'ny sehatry ny fitsarana ara-moraly.
Raha vokatry ny fahatakarana am-pahibemaso ny olana ara-moraly ao anatin'ilay fihetsika no namoronana ny fihetseham-po, dia famantarana ny fitondran-tenan'i Robena izany. Saingy indray, i Levy izay voan'ny amygdala ka noho izany dia tsy naneho fihetseham-po toy izany, dia nandray fanapahan-kevitra ara-moraly tsara, ary noho izany dia mendrika ny dera sy fankasitrahana ara-moraly avy amin'i Robena izy. Ny maha-samihafa azy sy Robena dia eo amin’ny rafitry ny atidohany ihany fa tsy eo amin’ny fitsarany sy ny fanapahan-keviny ara-moraly. Araka ny voalaza, ny firafitry ny saina dia zava-misy tsy miandany ary tsy misy ifandraisany amin'ny fankasitrahana ara-moraly ny olona iray.
Toy izany koa, ny tompon'ny Tal Agli dia manoratra ao amin'ny teny fampidirana ao amin'ny taratasy C:
Ary amin'ny zavatra nolazaiko tao dia tsarovy ny zavatra reko izay nolazain'ny olona sasany avy amin'ny lalan'ny saina momba ny fianarana ny Torah masina, ka nilaza fa ny mpianatra izay manavao ny zava-baovao sy faly sy mankafy ny fianarana, dia tsy mianatra ny Torah. , Fa izay mianatra sy mankafy ny fianarany dia miditra an-tsehatra amin'ny fianarany sy ny fahafinaretana.
Ary tena fahadisoana malaza izany. Mifanohitra amin’izany, satria io no fototry ny didy hianarana ny Torah, dia ny ho enina sy ho faly sy finaritra amin’ny fandalinana azy, ary avy eo dia levon’ny rany ny tenin’ny Torah. Ary satria nankafiziny ny tenin'ny Torah, dia nifikitra tamin'ny Torah izy [ary jereo ny fanamarihan'i Rashi Sanhedrin Noa. D.H. sy lakaoly].
Ireo "diso" dia mihevitra fa izay faly sy mankafy ny fianarana dia manimba ny soatoavina ara-pivavahana amin'ny fianarana azy, satria izany dia natao ho an'ny fahafinaretana fa tsy ho an'ny lanitra (= noho ny azy). Fa diso izany. Ny hafaliana sy ny fahafinaretana dia tsy manalavitra ny hasarobidin'ny fivavahana.
Lafiny iray ihany anefa io. Avy eo izy dia manampy ny lafiny hafa:
Ary Modina, fa ny mpianatra dia tsy noho ny mitzvah fianarana, fa noho ny fahafinaretana amin'ny fianarana ihany, satria izany no atao hoe ny fianarana tsy noho ny tenany, toy ny mihinana matzah tsy noho ny mitzvah ihany. noho ny fahafinaretana misakafo; Ary hoy izy ireo: "Tsy hanao na inona na inona afa-tsy ny anarany, izay tsy ao an-tsainy." Fa mianatra noho ny mitzvah izy ary mankafy ny fianarana, satria fianarana ny anarany, ary masina rehetra, satria ny fahafinaretana dia mitzvah.
Izany hoe, ny hafaliana sy ny fahafinaretana dia tsy mampihena ny hasarobidin'ny hetsika raha mbola ampidirina amin'izany ho vokany. Fa raha ny olona iray no mianatra ho amin'ny fahafinaretana sy ny fifaliana, izany hoe ireo no antony manosika ny fianarany, dia azo antoka fa ny fianarana dia tsy ho an'ny tenany. Eto izy ireo dia "diso" marina. Ao amin'ny tenimiantsika dia lazaina fa ny fahadisoan'izy ireo dia tsy ny fiheverana fa tsy tokony hatao amin'ny fomba centrifugal ny fianarana. Mifanohitra amin'izany, marina tanteraka izy ireo. Ny fahadisoan'izy ireo dia ny fisian'ny fahafinaretana sy ny hafaliana dia manondro amin'ny heviny fa hetsika centrifugal izany. Tena tsy ilaina izany. Indraindray ny fahafinaretana sy ny fifaliana dia fihetseham-po izay tsy tonga afa-tsy vokatry ny fianarana ary tsy mahatonga izany.
Miverena amin’ny fitiavan’Andriamanitra
Ny fehin-kevitra mipoitra avy amin'ny zavatra hatramin'izao dia ny sary nolazaiko tany am-boalohany dia tsy feno, ary sarotra kokoa ny toe-javatra. Navahako ny fitiavana (centrifugal) sy ny filana (centrifugal). Avy eo dia nanavaka ny fitiavana ara-pihetseham-po sy ara-tsaina aho, ary hitanay fa i Maimonides dia mitaky fitiavana ara-tsaina fa tsy ara-pihetseham-po. Ny famaritana ao amin'ny fehintsoratra farany dia afaka manazava ny antony.
Rehefa mihetsi-po ny fitiavana dia matetika manana refy ifotony. Rehefa mahatsapa fihetseham-po mahery vaika amin'ny fitiavana ara-pihetseham-po ho an'ny olona iray aho, dia manana endrika manintona ahy ny hetsika ataoko mba hahazoana azy io. Manohana ny fihetseham-poko aho ary maniry ny hameno ny tsy fahampiana ara-pihetseham-po tsapako raha mbola tsy nahazo izany aho. Na dia fitiavana aza izany fa tsy filàna, raha mbola misy lafiny ara-pihetseham-po dia misy toromarika indroa eo amin'ny asa. Tsy miasa ho an'ny olon-tiana na olon-tiana aho, fa ho an'ny tenako koa. Mifanohitra amin'izany, ny fitiavana ara-tsaina madio tsy misy refy ara-pihetseham-po, dia amin'ny famaritana ny hetsika centrifugal madio. Tsy manan-kohanina aho ary tsy manakana ny fihetseham-po ao anatiko ka tsy maintsy manohana azy ireo, fa miasa ho an'ny malala. Noho izany ny fitiavana madio dia fitiavana ara-tsaina, platonic. Raha misy fihetseham-po miforona vokatr'izany dia mety tsy handratra izany, fa raha mbola vokatra ihany izany fa tsy anisan'ny antony sy antony manosika ny zavatra ataoko.
Ny didin’ny fitiavana
Izany dia mety hanazava ny fanontaniana ny fomba handidy ny fitiavana an'Andriamanitra, sy ny fitiavana amin'ny ankapobeny (misy koa ny didy ho tia ny fifaliana sy ny fitiavana ny vahiny). Raha fihetseham-po ny fitiavana dia mipoitra ho azy fa tsy anjarako. Inona àry no dikan’ilay didy hoe mitia? Fa raha ny fitiavana no vokatry ny fisainana ara-tsaina fa tsy ny fihetseham-po fotsiny, dia misy toerana hanambadiana izany.
Amin'ity toe-javatra ity dia fanamarihana fotsiny no azo aseho fa ny didy rehetra mifandraika amin'ny fihetseham-po toy ny fitiavana sy ny fankahalana dia tsy mitodika any amin'ny fihetseham-po fa amin'ny lafiny ara-tsaina. Ohatra fotsiny, i R. Yitzchak Hutner dia mitondra fanontaniana iray izay napetraka taminy ny fomba nandraisan’i Maimonides ny didy hitiavana an’i Hagara ao amin’ny kôlejintsika, satria tafiditra ao anatin’ny didy hitia fitiavana izany. Jiosy i Hagara ka noho izany dia tsy maintsy tiana satria Jiosy izy, ka inona no ampiana ny didy hoe tia an’i Hagara? Koa raha vahiny no tiako satria Jiosy tahaka ny fitiavako ny Jiosy rehetra, dia tsy nitandrina ny didy hoe tia vahiny aho. Noho izany, hoy ny fanazavan’ny RIA, tsy misy dika mitovy eto, ary samy manana ny votoatiny sy ny endriky ny fisiany ny mitzvah tsirairay.
Midika izany fa ny didy hitiavana an’i Hagara dia ara-tsaina fa tsy ara-pihetseham-po. Tafiditra amin’izany ny fanapahan-kevitra hitia azy noho ny antony toy izao sy izao. Tsy fitiavana tokony hamboleko ato anatiko ho azy izany. Tsy misy na inona na inona ho an'ny ekipa momba izany, satria mitzvos dia miantso ny fanapahan-kevitray fa tsy ny fihetseham-pontsika.
Ny toritenin'i Chazal momba ny fitiavana ny horakoraka dia mitanisa fitambarana hetsika tsy maintsy ataontsika. Ary toy izao no nametrahan’i Maimonides azy tao amin’ny fiandohan’ny andininy fahefatra amin’ny Tompo, saingy:
Ny teniny dia nataon'i Mitzvah hamangy ny marary, sy hampionona ny malahelo, sy hanala ny maty, sy hampiditra ny ampakarina, ary hiaraka amin'ny vahiny, ary hikarakara izay rehetra ilaina amin'ny fandevenana, eny an-tsorony sy volomparasy eo anoloany sy mitomania sy mihady ary mandevina, ary mifalia ry Siora, ny mpivady, na dia avy amin'ny teniny aza ireo matza rehetra ireo, dia amin'ny ankapobeny izy ireo ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao, ny zavatra rehetra tianao hataon'ny hafa aminao, ianao nataonareo ho rahalahinareo ao amin’ny Torah sy ny Matza.
Toa hita indray fa ny didin’ny fitiavana feno fitiavana dia tsy mikasika ny fihetseham-po fa momba ny asa  .
Izany koa dia mazava amin'ny andininy ao amin'ny parsha antsika izay manao hoe:
Ankehitriny, ary avy eo, ary na izany aza,
Ny fitiavana dia midika ho asa. Toy izany koa ny andininy ao amin’ny Parashat Akev (antsoina hoe herinandro manaraka. Deoteronomia XNUMX:XNUMX):
Ary tiava an'Andriamanitry ny Andriamanitrao, ka tandremo mandrakariva izay andraikiny aminy, dia ny lalàny sy ny fitsipiny ary ny fitsipiny.
Ankoatra izany, ny Sages koa dia mitaky ny andininy ao amin'ny parsha momba ny fiantraikany azo ampiharina (Brachot SA AB):
Ary amin'ny fanjakana rehetra - Tanya, hoy R. Eliezer, raha lazaina amin'ny fanahinao rehetra hoe nahoana no lazaina amin'ny taninao rehetra, ary raha lazaina amin'ny taninao rehetra hoe nahoana no lazaina amin'ny fanahinao rehetra izany, raha tsy hoe manana olona malalany ny vatany , Izany no lazaina any madad rehetra.
Ny fitiavana ve no manintona zavatra iray na ny lohateniny?
Tao anatin'ny sarety roa sy bokim-balaonina tao amin'ny vavahady faharoa no nanavaka ny zavatra sy ny toetrany na ny lohateny. Ny latabatra eo anoloako dia manana endri-javatra maro: vita amin'ny hazo, manana tongotra efatra, lava, mahazo aina, volontany, boribory ary maro hafa. Inona anefa ny latabatra? Misy milaza fa ny latabatra dia tsy inona fa ity fitambarana endri-javatra ity (ka angamba ny filozofa Leibniz no mihevitra). Tao amin'ny bokiko aho dia nilaza fa tsy marina izany. Ny latabatra dia zavatra hafa ankoatra ny fanangonana endri-javatra. Marina kokoa ny filazana fa manana ny toetrany izy. Ireo toetra ireo no toetrany.
Raha toa ka tsy inona fa fitambarana fananana ny zavatra iray, dia tsy nisy sakana tamin'ny famoronana zavatra avy amin'ny fitambaran'ny fananana rehetra  Ohatra, ny anana ny vato jade eo amin'ny rantsan-tànan'ny olona iray miaraka amin'ny efamira ny latabatra eo akaikiko sy ny airiness ny cumulonimbus rahona eo amboniny dia ho zavatra ara-dalàna ihany koa. fa nahoana no tsy? Satria tsy misy zavatra manana ireo toetra rehetra ireo. An'ny zavatra samihafa izy ireo. Fa raha ny zavatra iray dia tsy inona fa fitambarana fananana, dia tsy azo atao ny milaza izany. Ny fehin-kevitra dia hoe tsy fitambarana fananana ny zavatra iray. Misy fitambarana endri-javatra mampiavaka azy.
Saika ny zavatra rehetra lazaina momba ny zavatra iray, toy ny tabilao, dia ho fanambarana momba ny fananany. Rehefa lazaina fa volontsôkôlà izy io na hazo na lava na mahazo aina dia ireo rehetra ireo no mampiavaka azy. Azo atao koa ve ny miresaka momba ny latabatra (ny taolany)? Heveriko fa misy ny fanambarana toy izany. Ohatra, ny filazana fa misy ny latabatra. Ny fisiana dia tsy singa iray amin'ny latabatra fa adihevitra momba ny latabatra mihitsy  Raha ny marina, ny fanambarako avy any ambony fa misy zavatra toy ny latabatra mihoatra ny fitambaran'ny endri-javatra dia ny filazana fa misy ny latabatra, ary mazava ho azy fa izy ihany koa no miresaka momba izany fa tsy amin'ny endri-javatra ihany. Heveriko fa na ny filazana hoe zavatra iray ny latabatra fa tsy roa dia fanambarana momba ny tenany fa tsy famaritana na endri-javatra momba azy.
Rehefa niatrika izany fanavahana izany aho taona maro lasa izay dia nanamarika ny iray tamin'ireo mpianatro fa amin'ny heviny, ny fitiavana ny olona iray dia mitodika any amin'ny taolam-paty fa tsy amin'ny toetrany. Ny toetra no fomba hihaonana aminy, fa avy eo ny fitiavana dia mitodika any amin'ny tompon'ny toetra fa tsy amin'ny toetra, ka mety ho velona izy na dia miova aza ny toetra. Angamba izao no nolazain'ireo olon-kendry tao amin'ny Pirkei Avot: Ary ny fitiavana rehetra izay tsy miankina na inona na inona - tsy misy na inona na inona ary fitiavana foana. "
Fanazavana hafa momba ny fandrarana ny asa any ivelany
Ity sary ity dia mety hanome fanazavana bebe kokoa momba ny fandrarana ny asa vahiny. Ao amin'ny parsha anay (ary hangataka aho) ny Torah dia manitatra ny fandrarana ny asa vahiny. Ny Haftarah (Isaia toko M) koa dia mikasika ny lafiny mifanohitra aminy, dia ny tsy fahatanterahan'Andriamanitra:
Nhmo Nhmo Ami Iamr Andriamanitrao: Dbro amin'ny fo Iroslm sy Krao Alih Ci forth Tzbah Ci Nrtzh Aonh Ci Lkhh Mid Ikok Cflim Bcl Htatih: S. Cole mpamaky efitra Fno Drc Ikok Isro Barbh Mslh Lalhino: Cl Gia Insa sy Cl mount and Gbah Isfl mount and ary Hih Hakb Lmisor sy Hrcsim Lbkah : Virtzer Majeker: Nadshading hamono azy tao amin'ny efitra fatoriana Irah Bzrao Ikbtz Tlaim sy Bhiko Isa Alot Inhl: S. Iza Mdd Bsalo rano sy Smim Bzrt Tcn sy Cl Bsls Afr tany sy Skl Bfls Hrim sy Gbaot Bmaznim: Iza Tcn At wind Ikok sy Ais Atzto Iodiano: Iza Noatz sy Ibinho ary Ilmdho Msft sy Ilmdho fahendrena sy Drc Tbonot Iodiano: ay Goim Cmr Mdli sy Cshk Maznim Nhsbo ay Aiim Cdk Itol: ary Lbnon tsy misy Di Bar ary Hito tsy misy Di Aolh: S Cl Hgoim Kain Ngdo Mafs sy Tho Nhsbo aminy: ary Al Who Tdmion andriamanitra sy Mh Dmot Tarco ho azy: Hfsl Nsc mpanao asa tanana sy Tzrf Bzhb Irkano ary Rtkot mpanefy volamena: Hmscn Fotoana tsara handehanana amin'izao tontolo izao Th Cdk lanitra sy Imthm Cahl Lsbt: Hnotn Roznim Lain Sfti tany Ctho Ash: fahatezerana Bl Ntao fahatezerana Bl Zrao fahatezerana Bl Srs Bartz Gzam Mitovy amin'i Nsf Bhm sy Ibso sy Sarh Cks Tsam: S. Al Izay Tdmioni sy Asoh Iamr masina: Sao tampon'isan'ny Ainicm sy Rao Who Bra Ireo no Hmotzia Amin'ny isan'ny miaramilany ho an'ny rehetra, amin'ny anaran'i Jehovah no hiantsoany ny ankamaroany, ary ny herin'ny lehilahy dia sahy, ary tsy misy na dia iray aza:
Ity toko ity dia miresaka momba ny hoe tsy manana sarin'ny vatana i Gd. Tsy azo atao ny manova toetra ho azy ary mampitaha azy amin'ny zavatra hafa mahazatra antsika. Dia ahoana no mbola hifandraisanao aminy? Ahoana no hahatongavanao amin'izany na tsapanao fa misy izy io? Mamaly izany ny andininy eto: ara-tsaina ihany. Hitantsika ny zavatra nataony ary avy amin’izany no hanatsoaka hevitra fa misy izy ary mahery. Izy no namorona ny rafitry ny tany (namorona izao tontolo izao) ary mipetraka eo amin'ny faribolan'ny tany (mitantana azy). "Jereo izay nahary ireo izay mandany ny isan'ny miaramilany ho an'ny rehetra amin'ny anaran'i Yikra."
Raha ny voalazan'ny fizarana teo aloha dia azo lazaina fa tsy manana endrika i Gd, izany hoe tsy manana toetra tsikaritsika. Tsy mahita izany isika ary tsy manana traikefa ara-tsaina mifandraika amin'izany. Azontsika atao ny manatsoaka hevitra avy amin'ny hetsika ataony (amin'ny teny filamatra amin'ny filozofia intervening, manana lohatenin'ny hetsika izy fa tsy anaram-boninahitra).
Ny fitiavana ara-pihetseham-po dia azo amboarina amin'ny zavatra mivarotra amintsika mivantana, izay hitantsika na iainantsika. Aorian'ny traikefa sy ny fihaonan'ny saina mivantana, ny fitiavana mipoitra dia mety hivadika ho taolana, saingy izany dia mitaky ny fanelanelanana ny anaram-boninahitra sy ny toetran'ilay malala. Amin'ny alalan'izy ireo no mihaona aminy. Sarotra noho izany ny miady hevitra fa misy fitiavana ara-pihetseham-po amin'ny enti-manana iray izay tsy tratrantsika afa-tsy amin'ny alalan'ny tohan-kevitra sy ny fanatsoahan-kevitra ara-tsaina fotsiny, ary tsy manana fomba hifandraisana mivantana amin'izany isika. Heveriko fa misokatra ho antsika eto indrindra ny lalan'ny fitiavana ara-tsaina.
Raha izany no izy dia tsy mahagaga raha ny parsha sy ny haftarah no mifandray amin'ny abstraction an'Andriamanitra, raha ny parsha dia mitondra ny baiko ho tia azy. Rehefa miditra ao anatiny ny abstraction an'Andriamanitra, ny fehin-kevitra miharihary dia ny fitiavana Azy dia tokony ary mety ho eo amin'ny sehatra ara-tsaina ihany fa tsy eo amin'ny sehatry ny fihetseham-po. Araka ny voalaza dia tsy fatiantoka izany satria araka ny efa hitantsika dia io indrindra no fitiavana madio sy feno indrindra amin'ny rehetra. Mety hiteraka fihetseham-po feno fitiavana ho azy ihany koa io fitiavana io, saingy tovana ihany izany indrindra. Ampahany tsy misy dikany amin’ny fitiavana ara-tsaina an’Andriamanitra. Ny fihetseham-po toy izany dia tsy mety ho antony voalohany indrindra satria tsy misy na inona na inona azo raisina. Araka ny nolazaiko, ny fihetseham-pon'ny fitiavana dia hita amin'ny endrik'ilay malala, ary tsy misy ao amin'Andriamanitra.
Mety misy lafiny hafa koa hita eto amin’ny fandrarana ny asa vahiny. Raha mamorona endrika ho an'Andriamanitra ny olona iray, miezaka ny hamadika izany ho zavatra tsikaritra izay ahafahan'ny olona mifandray mivantana amin'ny saina, dia mety ho lasa fihetseham-po ny fitiavana azy, izay manana toetra centripetal izay mametraka ny olon-tiana fa tsy ny olon-tiana. ny foibe. Koa takian'i Gd ao amin'ny haftarahntsika ny hidirantsika ao anatiny fa tsy misy fomba hanahafana azy (hahatonga azy ho toetra rehetra), ary ny fomba hahatongavana amin'izany dia filozofia-intellectuel, amin'ny alalan'ny inferences. Noho izany, ny fitiavana azy, izay ifandraisan'ny raharaha, dia hanana toetra toy izany koa.
Heveriko fa misy ampahany kely amin'ny asa vahiny amin'ny fomba fijery ara-pivavahana misy antsika. Mihevitra ny olona fa ny asa ara-pivavahana mangatsiaka dia fatiantoka, fa eto aho dia niezaka nampiseho fa manana refy feno sy madio kokoa. Matetika ny fitiavana ara-pihetseham-po no mifikitra amin’ny endrik’Andriamanitra sasany, ka mety hijaly noho ny fanampiny sy ny fanompoam-pivavahana any ivelany. Niezaka niady hevitra teto aho hanohana ilay tesis hoe ny fitiavana an'Andriamanitra dia heverina ho tena platonic, ara-tsaina ary ara-pihetseham-po.
 Marina fa raha simba ny amygdala an'i Levy, dia ho sarotra be, ary mety tsy ho azony ny zavatra nataony. Tsy azony ny atao hoe ratra ara-pihetseham-po ary nahoana izany no mampalahelo an'i Simon. Noho izany, ny ratra amin'ny amygdala dia mety tsy hamela azy hahatakatra ny dikan'ny zavatra nataony, ary tsy hieritreritra izy fa tokony hiala tsiny. Saingy zava-dehibe ny mahatakatra fa io dia asa hafa amin'ny amygdala, izay tsy dia manan-danja loatra amin'ny tranga misy antsika. Ny hevitro dia raha azony ara-teorika fa nandratra an'i Simona na dia tsy nampijaly azy aza izany, dia feno sy madio ny fangatahana famelan-keloka. Tsy dia zava-dehibe loatra ny fihetseham-pony. Marina fa ara-teknika raha tsy nanana fihetseham-po toy izany izy dia mety tsy nanao izany satria tsy azony ny maha-zava-dehibe ny fihetsika sy ny dikany. Saingy resaka teknika fotsiny izany. Mety misy ifandraisany amin'ny fanokafana ahy fa ny saina no mandray fanapahan-kevitra, ary ny fihetseham-po no anisan'ny tokony hodinihina.
Mampahatsiahy ahy ny lahateny iray henoko tao amin'ny TED avy amin'ny neurologista iray izay simba ny atidoha ary tsy afaka niaina fihetseham-po. Nianatra naka tahaka ireo fihetsika ara-teknika ireo izy. Tahaka an'i John Nash (fantatra amin'ny bokin'i Sylvia Nasser, Wonders of Reason, sy ilay sarimihetsika nanaraka azy), izay niaina tontolo iainana an-tsain'olombelona ary nianatra tsy niraharaha izany tamin'ny fomba ara-teknika tanteraka. Resy lahatra izy fa misy tokoa ny olona manodidina azy, saingy fantany fa illusion ireny ka tokony tsy horaharahainy na dia mbola nisy tao anatiny tamin’ny hery feno aza ilay traikefa. Ho an'ny tanjon'ny fifanakalozan-kevitra, dia hihevitra an'i Levy ho toy ny amygdala tsy misy fahaiza-miombom-pihetseham-po ara-pihetseham-po isika, izay nianatra nahafantatra tamin'ny fomba ara-tsaina sy mangatsiaka (tsy misy fihetseham-po) fa manimba olona ny fihetsika toy izany na hafa, ary ny famelan-keloka dia tsy maintsy tadiavina hampitony azy ireo. Eritrereto koa fa sarotra ho azy ny fangatahana famelan-keloka, toy ny ho an'ny olona mahatsapa, raha tsy izany dia azo lazaina fa tsy tokony hankasitrahana ny fihetsika toy izany raha toa ka tsy mitaky vidiny ara-tsaina amin'izay manao izany izy.
 Jereo izany amin'ny antsipiriany ao amin'ny boky fahiraika ambin'ny folo ao amin'ny Talmudic Logic Series, The Platonic Character of the Talmud, Michael Avraham, Israel Belfer, Dov Gabay ary Uri Shield, London 2014, ao amin'ny fizarana faharoa.
 Maimonides ao amin'ny fakany dia milaza fa mitzvot roa izay tsy manavao zavatra mihoatra ny didin'ny mpanjifa hafa dia tsy tokony hotendrena.
 Ary tsy mitovy amin'ny didy hoe tia ny fahamatorana izay misy azy. Jereo ao ny fanamarihanay.
 Na dia didy avy amin'ny tenin'ny mpanora-dalàna aza ireo, ary azo inoana fa ny didy Dauriyta dia eny amin'ny fihetseham-po, fa izay manatanteraka ireo asa ireo noho ny fitiavany ny mpiara-belona aminy dia manatanteraka izany didin'i Dauriyta izany koa. Saingy tsy misy sakana amin'ny fitenin'ny Maimonides eto mba hahatakarana fa na ny Dauriyta mitzvah izay tena miresaka momba ny fifandraisana amin'ny fiderana aza dia mety ho ara-tsaina fa tsy ara-pihetseham-po araka ny nohazavainay teto.
 Araka ny nohazavaiko tao, io fanavahana io dia mifandray amin'ny fanavahana Aristotelian ny zavatra sy ny raharaha na ny zavatra ary ny endrika, ary ao amin'ny filozofian'i Kant amin'ny fanavahana ny zavatra mihitsy (ny nuumana) mba hiteny araka izay hita eo imasontsika (ny tranga).
 Jereo ao ny ohatra nomeko avy amin'ny tantaran'ilay mpanoratra Arzantina Borges, "Ochber, Telen, Artius", amin'ny dunes nadikan'i Yoram Bronowski.
 Nasehoko teo fa azo entina amin’izany ny porofo avy amin’ny hevitra ontolojika momba ny fisian’Andriamanitra. Raha ny fisian'ilay zavatra no toetrany, satria dia azo porofoina amin'ny heviny ny fisian'Andriamanitra, izay tsy azo inoana. Na dia jereo ny fifanakalozan-kevitra amin'ny antsipiriany momba an'io hevitra io ao amin'ny kahie voalohany amin'ny tranokala. Teo aho dia niezaka nampiseho fa tsy mitombina ny hevitra (na tsy ilaina aza).
Fisaintsainana taorian'ny nandaozan'i R. Benjamin David Levy (tsangantsanganana faha-124)
Darush, Poivre, Fitiavana an'Israely sy ny hatsarany (Tsanganana 52)
Hiran'ny Tany Tiako: Fijery tsara tarehy momba ny Tanindrazana (Tsanganana 153)
Hevitra 16 momba ny "Ny fitiavana: eo anelanelan'ny fihetseham-po sy ny saina (Tsanganana 22)"
30 Tishrei 10 - 2016/12/11 amin'ny XNUMX:XNUMX
Inona no dikan'ny hoe 'fitiavana ara-tsaina', satria fihetseham-po ny fitiavana?
Sa lesoka izany ary tena midika hoe reference sy fifandraisana amin'ny hafa - ary amin'ny 'psyche' dia tsy ny fahatakarana analytique ny fikasana fa ny intuition no tokony hatao?
Ary raha ny fanoharana avy amin'ny fitiavana, dia mety tsy midika izany fa ny fitiavana dia mampihetsi-po, fa ny tena fototry ny fanoharana dia ny hoe 'tsy afaka' ny olona iray dia tsy mety diso foana ... Angamba ny zava-misy fa ity intuition ity dia 'mandresy' ny olona iray manontolo.
Ny hevitro dia tsy izany. Ny fihetseham-po dia mariky ny fitiavana indrindra fa tsy fitiavana ny tenany. Ny fitiavana mihitsy dia fanapahan-kevitra amin'ny fahamendrehana, afa-tsy raha ny fihetseham-po no mitranga dia izaho angamba no nanapa-kevitra.
Tsy hitako izay dikan'ny hoe mandalina. Fanapahan-kevitra izany no tokony hatao, araka ny nosoratan’i Maimonides ao amin’ny andininy faharoa.
Raha tsy tonga hanazava ny adidiko ny fanoharana, inona no ilana azy? Lazainy amiko hoe inona no hanjo ahy amin'ny tenany? Tonga nilaza ny adidiko angamba izy.
30 Tishrei 10 - 2016/12/13 amin'ny XNUMX:XNUMX
Toa misy fahasamihafana eo amin'ny 'asa avy amin'ny fitiavana' izay nifampiraharahan'ny raby tamin'ny lahatsoratra, sy ny 'mitzvot ahavat ha' (izay i Maimonides no miresaka momba ny lalàn'i Yeshuat)….
Ao amin'ny Halachot Teshuvah Maimonides dia miresaka momba izay nahatonga an'i Edena hivavaka amin'ilay anarana - ary tena mandresy lahatra tokoa ny tenin'ny raby…
Saingy noho ny maha-mitzvah azy, ny didin'ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy mifandray amin'izay mitondra ny olona iray hiasa, fa adidy amin'ny fampandrosoana (tahaka ny tenin'i Hagli Tal - fifaliana izay mampivelatra ny antsasaky ny adidy) ... Mijery ny famoronana
Manaiky tanteraka. Izany tokoa no fifandraisana misy eo amin’ny lalàna fototra ao amin’ny Torah sy ny Teshuva. Kanefa ao amin’ny H. Teshuvah dia ambarany amin’ny fanaovana ny marina ny fitiavana satria fahamarinana izany. Inona no misy eo amin'izany sy ny fihetseham-po? Azo inoana fa ny fitiavana iraisan'ny toerana roa dia fitiavana iray ihany. Ao amin'ny Torah fototra dia manoratra izy fa ny fitiavana dia azo amin'ny fandinihana ny zavaboary (io no inference noresahiko), ary ao amin'ny Teshuvah no hazavainy fa ny dikan'izany amin'ny resaka fiasana amin'ny fitiavana dia ny fanaovana ny fahamarinana satria izany no fahamarinana. Ary izany no teniko.
Ny foto-kevitry ny tahotra dia tsy mitovy amin'ny Yeshiva sy ny Halachot Teshuvah
Lojika hafahafa izany. Raha miresaka momba ny asa mba hahazoana vola sy ny firesahana momba ny fividianana zavatra amin'ny alalan'ny vola, ny teny hoe "vola" dia miseho amin'ny heviny samihafa? Koa nahoana rehefa mahatsapa fitiavana ianao na manao zavatra noho ny fitiavana dia miseho amin'ny heviny roa ny teny hoe "fitiavana"?
Raha ny momba ny tahotra dia tsy maintsy resahina ihany koa ny fifandraisana misy eo amin'ny tahotra ny fisandratana sy ny tahotra ny sazy. Raha mitovy hevitra no ampiasaina dia tokony hitovy ny dikany, na latsaka kely miaraka amin'ny fifandraisana ampy eo amin'ireo dikany. Amin'ireo tranga roa ireo dia mitovy ny tahotra, ary ny fahasamihafana dia eo amin'ny fanontaniana hoe inona no mahatonga ny tahotra, ny sazy na ny fisandratana.
Ny fandikana ao amin'ny Halacha C dia toa tery amiko.
Sarotra ny manaisotra ny refin'ny traikefa amin'ny tenin'i Maimonides ary milaza fa ny "fanafoanana ny Torah" ihany no ampitandremany. Toa milazalaza ny zava-niainana lalina nananan’ilay tia an’Andriamanitra fa ny fitiavana an’Andriamanitra ihany no zava-dehibe eto amin’izao tontolo izao. Tsy ekeko mihitsy ny hevitr'ilay lahatsoratra hoe ny traikefa ara-pihetseham-po dia mametraka ny olon-tiana ho eo afovoany ary ny fitiavana tsy misy afa-tsy no mametraka ny malala ho ivo. Raha ny fahitako azy dia misy lenta ambonin'ny fisarahana mangatsiaka ary rehefa mitambatra amin'ny sitrapon'ny olon-tiana ny sitrapon'ny olon-tiana dia ny fahatanterahan'ny sitrapon'ny olon-tiana no lasa fahatanterahan'ny sitrapon'ny olon-tiana ary ny mifamadika amin'izany. amin'ny resaka "ataovy ny sitraponao araka izay sitrapony". Amin'ity fitiavana ity dia tsy azo atao ny miresaka momba ny olon-tiana na ny olon-tiana eo afovoany fa ny faniriana iraisan'ny roa. Raha ny hevitro dia miresaka izany i Maimonides rehefa miresaka momba ny fanirian'ny tia an'Andriamanitra izy. Tsy mifanohitra amin’ny fanaovana ny marina izany satria fahamarinana azo avy amin’ny faniriana ny fahamarinana.
1. Amiko dia toa tsy sarotra loatra izany. Naneho hevitra momba ny fitsaboana marina ny fanoharana aho.
2. Ny fiheverana ao amin'ny lahatsoratra dia tsy hoe ny traikefa ara-pihetseham-po no mametraka ny olon-tiana ho ivon-toerana, fa mazàna manana refy toy izany koa izy (miditra amin'izany).
Sarotra be amiko ny resaka momba ity fikambanana mistika ity ary heveriko fa tsy azo ampiharina, indrindra fa tsy amin'ny zavatra abstract sy tsy azo tsapain-tanana toa an'Andriamanitra, araka ny nosoratako.
4. Na dia mety tsy mifanohitra amin’ny fanaovana ny fahamarinana aza izany satria marina izany, dia azo antoka fa tsy mitovy aminy izany. Maimonides no mamaritra izany amin'ny fitiavana.
30 Tishrei 10 - 2016/12/14 amin'ny XNUMX:XNUMX
Toy ny mahazatra, mahaliana sy mampieritreritra.
Etsy an-danin'izany, ny dikan'ny hoe Maimonides dia tsy hoe 'malahelo kely' fotsiny, ary tsy maika loatra, fa fanodinkodinana fotsiny (amin'ny famelan-keloka). Nanao izay ho afany i Maimonides mba hamaritana ny toe-piainana ara-pihetseham-po, ary terenao izy hilaza fa mbola zavatra mitombina sy mampisaraka izany (araka ny famaritanao azy) [ary ny fanehoan-kevitra momba ny 'tsy fahombiazana' mifandraika amin'ny fanoharana dia tsy maharesy lahatra mihitsy eto amintsika. contexte, satria tsy hoe tsy miraharaha fanoharana fotsiny eto fa tsy miraharaha ].
Raha ny fanontaniana ankapobeny momba ny maha-zava-dehibe ny fihetseham-po, dia tokony ho marihina fa ny fihetseham-po rehetra dia vokatry ny fahalalana ara-tsaina sasany. Ny tahotra bibilava dia avy amin'ny fahafantarantsika fa mampidi-doza izany. Tsy hatahotra ny hilalao bibilava ny ankizy kely.
Noho izany dia tsy marina ny filazana fa ny fihetseham-po dia instinct fotsiny. Instinct izay mihetsika vokatry ny fahatsapana sasany. Noho izany ny olona iray izay tsy simba ny atidoha, ary tsy misy fihetseham-po mipoitra ao aminy aorian'ny fandratrana olon-kafa, dia hita fa ny fomba fijery ara-moraly dia tsy ampy.
Raha ny hevitro dia io koa no fikasan'i Maimonides. Rehefa mitombo ny fahatsapan’ny olona ny fahamarinana, dia mitombo koa ny fahatsapana fitiavana ao am-pony. Amiko dia mazava ny zavatra ao amin'ny toko (Halacha XNUMX):
Fantatra ary mazava tsara fa ny fitiavan’Andriamanitra dia tsy voafatotra ao am-pon’ny olona iray – mandra-pahazoany izany hatrany araka ny tokony ho izy ka handao ny zava-drehetra eto amin’izao tontolo izao afa-tsy izy, araka ny nandidiany sy nilazany hoe: ‘amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. ' - saingy tamin'ny hevitra iray fantany. Ary araka ny hevitra dia hisy ny fitiavana, raha kely ary raha be dia be. "
Miharihary eto: a. Ny fitiavana dia fihetseham-po mifatotra ao am-pon'ny olona iray.
B. Ny didy ao amin’ny Torah dia mikasika ny fihetseham-po.
fahatelo. Satria io fihetseham-po io dia vokatry ny saina,
Ny dikan’ny didy hoe tia an’Andriamanitra dia ny mitombo ao an-tsain’Andriamanitra.
Tsy hitako tamin'ny tenin'i Maimonides teto fa fihetseham-po io. Fahatsiarovan-tena izany fa tsy voatery ho fihetseham-po. Tsy raharahanao koa ny fifandraisan'ny B sy C izay nijoroako tamin'ny fanamarihako.
Fa ambonin'izany rehetra izany dia tsy manana olana aho amin'ny foto-kevitra amin'ny teninao, satria na dia amin'ny fomba fanaonao aza dia ny asa saina, ny mahafantatra sy mahafantatra, fa tsy ny fihetseham-po. Ny fahatsapana raha noforonina ho vokany - dia ho noforonina, ary raha tsy izany - dia tsy. Noho izany dia mipoitra amin'ny farany ny fihetseham-po tsy voafehintsika. Eo am-pelatanantsika ny fampahalalana sy ny fianarana, ary ny fihetseham-po dia vokatry ny ankamaroany. Ka inona no mahasamihafa ny zavatra atolotrao sy izay nosoratako?
CPM ho an'ny olona simba ny atidohany ka tsy afaka mitia. Heverinao ve fa tsy afaka mitandrina ny didin’ny fitiavan’Andriamanitra ny olona toy izany? Raha ny hevitro dia eny.
Farany, raha efa nanonona ilay halakhah resahina ao Rambam ianao, nahoana no nanapaka izany ianao? Ity ny fiteny feno:
Iaraha-mahalala sy mazava fa tsy voafatotra ao am-pon’ny olona ny fitiavana an’Ilay Masina raha tsy efa mahatratra izany araka ny tokony ho izy hatrany ary mandao ny zava-drehetra eto amin’izao tontolo izao afa-tsy izy, araka ny nandidiany sy nilazany tamin’ny fonao manontolo hoe: “Ilay Sambatra. tsy tia Kely sy be loatra, noho izany ny olombelona dia tsy maintsy miara-mahafantatra sy mibebaha amin’ny fahendrena sy ny saina izay mampahafantatra azy ny cono ho hery izay azon’ny olombelona takarina sy ahazoany araka ny hitantsika ao amin’ny lalàna fototra ao amin’ny Torah.
Mazava amintsika fa hevitra io fa tsy fihetseham-po. Ary ny ankamaroan'ny fihetseham-po dia vokatry ny saina. Ny adidin’ny fitiavana an’Andriamanitra dia tsy amin’ny fihetseham-po fa amin’ny saina. Ary NPM ho an'ny atidoha simba.
Ary ahoana no tsy hiafarany amin'ny tenin'ny Raby amin'ny fanatrarana azy eo:
Zavatra fantatra sy mazava, sns. AA ny hadalana tsy fantatray hoe nahoana no zavatra tari-dalana izany, ary adikanay amin'ny teny roa ny fitenin'ny tononkalo ho fahadalana amin'i Davida, ary ny raharaha hafa momba ny fitiavany dia ho tonga amin'ny raharahanareo izay tsy hovalianareo. saina amin’izy ireo
Hatreto aloha dia tsara ho an'ity takariva ity.
1. Araka ny hevitro dia mety kokoa amin'ny fihetseham-po fa tsy ny fahatsiarovan-tena ilay fehezanteny hoe 'mifatotra ao am-pon'ny olona'.
2. Ny fifandraisan'ny B sy ny C dia ny antony sy ny vokany. Izany hoe: ny saina dia mitondra ho amin'ny fitiavana. Ny fitiavana dia mitondra asa amin'ny anarany (tsy fitiavana izany fa 'asa avy amin'ny fitiavana', izany hoe: asa miainga avy amin'ny fitiavana).
Seder amin'ny tenin'i Maimonides dia mifandray amin'ny lohahevitra - ny lohaheviny dia tsy ny didin'ny fitiavana an'Andriamanitra (io no lohahevitra ao amin'ny fototry ny Torah) fa ny asan'Andriamanitra, ary rehefa tonga hanazava ny asa tsara indrindra izy. Izy no manazava ny toetrany (ny anarany - II) sy ny loharanony ), Ary avy eo manazava ny fomba hahatongavana amin'izany fitiavana izany (Da'at - HV).
Hazavaina izany ao amin’ny tenin’i Maimonides eo amin’ny faran’ny Halacha XNUMX manao hoe: “Ary raha tia an’Andriamanitra izy, dia hanao ny didy rehetra noho ny fitiavana avy hatrany”. Dia ao amin'ny Halacha C dia manazava ny atao hoe fitiavana marina.
3. Tena lehibe ny maha samy hafa ny tenintsika. Raha ny hevitro dia ao anaty fihetseham-po ny fitandremana ny mitzvah, izany hoe: tena ivon'ny fihetseham-po fa tsy vokatra an-jorom-bala sy tsy ilaina. Izay mitandrina ny 'fitiavana an'Andriamanitra' Platon sy tafasaraka dia tsy mitandrina ny mitzva. Raha maratra ao amin'ny amygdala izy dia voaolana tsotra izao.
4. Tsy azoko izay nampian'ilay teny avy amin'ny fitohizan'ny fitenin'i Maimonides
(Tsy hita ao amin'ny edisiona Frenkel ny teny hoe "tsy tia an'i Masina [fa raha ny hevitro...]", ka tsy nanonona azy ireo aho, fa iray ihany ny dikany. Fitiavana ”toy ny teny amin'ny lamina, fa izy io. mba hanazavana ihany, ary eto ihany koa ny dikany)
1. Tsara. Tena tsy azoko antoka izany.2. manaiky izany rehetra izany aho. Ary mbola manao ny marina ihany satria fahamarinana izany amiko dia toa tsy misy ifandraisany amin'ny fihetseham-pon'ny fitiavana fa amin'ny fanapahan-kevitra ara-tsaina (angamba ny fihetseham-pon'ny fitiavana no miaraka aminy, na dia tsy voatery aza. Jereo ny lahatsoratra teo aloha).
3. Noho izany dia manontany foana aho hoe maninona no hanambatra antsika amin'ny zavatra mipoitra ho azy? Amin'ny ankapobeny ny mitzvah dia ny fanalefahana ny fahalalana sy ny asa ara-tsaina, ary ny fitiavana izay mipoitra ho azy aorian'izany (sambatra ny mino) dia tena famantarana fa efa vitanao izany. Koa izay simba ny sainy dia tsy voaolana, fa mankatò tanteraka ny didin'Andriamanitra. Tsy manana famantarana izany isika, fa Andriamanitra no mahalala ary Izy no tsara indrindra.
4. Ny teny avy amin'ny tohin'ny fitenin'i Maimonides dia miresaka momba ny famantarana ny fitiavana sy ny fahalalana, na indrindra fa ny fitiavana dia vokatry ny fahafantarana.
Amiko dia efa mazava tsara ny toerana misy anay.
Momba ny fanontaniana miverimberina: tsotra be ny zavatra.
Andriamanitra dia mandidy antsika hahatsapa. Eny!
Ahoana anefa no fomba hanaovana izany? Mampitombo ny hevitra.
Fomba ara-pahaizana: fitandremana ny mitzvah - fihetseham-po, fihetsika mitzvah - hevitra maro.
(Malaza ny tenin'ny Raby Solovitchik momba ny mitzvos sasany: vavaka,
Fa valio, fa ny fitandremana ny didy no ao am-po).
Raha toa ianao ka vonona ny hanaiky ny teorika mety 'mikarakara ny fihetseham-po
Ny anay fa tsy avy amin'ny fihetsika sy ny hevitray ihany, ka azo takarina tsara ny zava-misy fa tsy manahiran-tsaina mihitsy.
Avy eo ny fihetseham-po dia tsy "vokatra" ilaina fotsiny, fa ny vatan'ny mitzvah.
(Ary mifandray eto ny teny malaza nataon’ny Rab’a momba ny tsy fitsiriritana.
Any izy dia mampiasa fitsipika iray ihany: Raha mahitsy ny sainao,
Na izany na tsy izany dia tsy hipoitra ny fahatsapana fitsiriritana)
Ny tena marina dia milaza ianao fa olona afaka araka ny saina fa tsy araka ny fihetseham-pony, ohatra, ny fitiavana an'Andriamanitra dia ara-tsaina fa tsy ara-pihetseham-po, fa toa azo lazaina fa toy ny olona ihany. izay manakana ny fihetseham-pony dia mifamatotra amin'izy ireo fa tsy olona afaka toy izany koa ny olona manao araka ny saina voafatotra amin'ny sainy fa tsy malalaka, ianao koa dia milaza manokana momba ny fitiavana fa ny fitiavana ambony indrindra ara-pihetseham-po dia ara-pihetseham-po satria ny saina mitodika any amin'ny hafa tsy hanohana ny fihetseham-po (tenanao) fa io saina io koa no mamelona ny tenanao hoe ahoana ny mahasamihafa anao amin'ny egocentrism eo amin'ireo tranga roa ireo?
Mampahatsiahy anao aho fa raha vao niresaka isika dia nankafizinao ny fifanakalozan-kevitra ary nilaza tamiko ianao fa tokony hanoratra momba ilay lohahevitra hoe ny olona iray izay mitondra ny fiainany araka ny voalazan'i Halacha ihany no olona misaina, ary momba ny maha-tokana an'i Talmud sy Halacha mba haka hevitra mibaribary. ary ampiharo azy ireo ho fampiharana.
Azo lazaina fa ny saina sy ny fihetseham-po dia asa roa samy hafa miaraka amin'ny sata mitovy. Saingy amin'ny fanapahan-kevitra ara-tsaina dia tafiditra ao anatin'izany ny sitrapo fa ny fihetseham-po dia instinct izay terena amiko. Nanitatra izany tao amin'ny bokin'ny Freedom Science aho. misaotra amin'ny fampahatsiahivana. Angamba hanoratra lahatsoratra momba izany aho amin'ny tranokala.
Heveriko fa hahaliana anao izany http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/med_and_physiol/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%92%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
Mbola betsaka ny resaka toy izany, ary ny ankamaroany dia mijaly noho ny tsy fahampian'ny foto-kevitra (aza mamaritra ny fihetseham-po sy ny saina. Na izany na tsy izany, tsy misy idiran'ny teniko izany satria miresaka momba ny fiasan'ny atidoha ary miresaka momba ny fisainana aho. Ny fisainana dia atao amin'ny saina fa tsy ati-doha.Tsy mieritreritra izy satria tsy manapa-kevitra ny hanao izany ary tsy "mihevitra an'izany." Ny neuroscience dia mihevitra fa ny asan'ny atidoha = misaina, ary io no nosoratako fa araka izany koa ny rano mandeha dia miditra amin'ny fisainana. hetsika.
26 Sivan 06 - 2019/20/42 amin'ny XNUMX:XNUMX
Ao amin’ny fizarana manaraka amin’ilay lahatsoratra lazaina fa, T.S. Hasehoko ao anaty fononteny efamira:
“Izany hoe, ny hafaliana sy ny fahafinaretana dia tsy mampihena ny hasarobidin’ny asa raha mbola miraikitra amin’izany ho vokany. Fa raha ny olona iray no mianatra ho amin'ny fahafinaretana sy ny fifaliana, izany hoe ireo no antony manosika ny fianarany, dia azo antoka fa ny fianarana dia tsy ho an'ny tenany. Eto izy ireo dia "diso" marina. Ao amin'ny voambolanay dia lazaina fa ny fahadisoan'izy ireo dia tsy hoe nihevitra izy ireo fa tsy tokony hatao amin'ny fomba centrifugal ny fianarana [= cellule centrifugal]. Mifanohitra amin'izany, marina tanteraka izy ireo. Ny fahadisoan'izy ireo dia ny fisian'ny fahafinaretana sy ny hafaliana dia manondro araka ny hevitr'izy ireo fa izany dia hetsika centrifugal [= centrifugal cell]. Tena tsy ilaina izany. Indraindray ny fahafinaretana sy ny fifaliana dia fihetseham-po izay tsy tonga afa-tsy vokatry ny fianarana ary tsy mahatonga izany.
2. Ny "contradiction" ao amin'ny lalàna roa mifanakaiky ao Rambam momba ny fitiavana, toa nipetraka tsotra izao ny tenin'ny ando vakana nentinao taty aoriana sy nanazavana azy tao amin'ny TotoD. Izany indrindra no nolazain’i Maimonides teto momba ny fitiavan’Andriamanitra. Misy antony ara-tsaina izany, ary misy vokany ara-pihetseham-po. Hazavainy koa ny fitiavana resahiny ao amin’ny Lalàna fototra ao amin’ny Torah P.B. Ny fandinihana ny famoronana sy ny fanekena ny fahendren’Andriamanitra sy ny hatsaran-toetrany. Ny anton'ny fahatsiarovan-tena / ara-tsaina - dia miteraka [koa] vokatra ara-pihetseham-po. Ary izany indrindra no nambarany teto.
26 Sivan 06 - 2019/20/57 amin'ny XNUMX:XNUMX
1. Tena marina. Namboariko.
2. Eto aho tsy manaiky. Toa tsy misy fahasamihafana toy izany eo amin'ireo halachah roa araka ny voalazan'i Mahal Teshuvah.
'Fitiavana maimaim-poana' - amin'ny ampahany fa tsy amin'ny lohateniny
16 Tamoza 07 - 2020/17/39 amin'ny XNUMX:XNUMX
BSD XNUMX Tammoz XNUMX
Raha jerena ny fanavahana atolotra eto eo amin'ny fitiavana eo amin'ny ampahany amin'ny taolana sy ny fitiavana amin'ny ampahany amin'ny anaram-boninahitra - dia azo atao ny mahazo ny hevitry ny 'fitiavana maimaim-poana' noforonin'i Rabbi Kook.
Misy toe-javatra mampihoron-koditra ny toetran’ny olona iray na ny fitarihana ka tsy misy toetra tsara ananany azo tsapain-tanana hanaitra ny fitiavana voajanahary aminy.
Amin'ny toe-javatra toy izany, dia tsy misy afa-tsy ny 'fitiavana amin'ny taolana', fitiavana ny olona iray fotsiny noho ny maha 'tia ny olona noforonina tao B'Tselem' na 'tia an'i Israely antsoina hoe zazalahy ho an'ilay toerana', izay na dia amin'ny adidy ambany indrindra amin'ny 'zazalahy mpanao kolikoly' aza dia mbola 'antsoina hoe zazalahy', ny ankamaroan'ny 'fampalahelovan'ny ray' dia misy amin'ny zanany lahy.
Marihina anefa fa tsy hoe ‘fitiavana maimaim-poana’ fotsiny ny fitiavan’ny ray ny zanany na dia ao anatin’ny mahantra indrindra aza. Mamelona ihany koa ny fanantenana fa ny soa miafina ao amin'ny ankizilahy an-keriny - dia ho tonga koa. Ny finoana matanjaka ananan’ny ray amin’ny zanany sy ny Mpamorona ao amin’ny olony — dia mety hampiely ny fitaomana tsara ao aminy, ary noho izany dia ‘ary hampody ny fon’ny ray amin’ny zanany koa dia mety hitondra ny fiverenan’ny fon’ny zanaka ho amin’ny rainy.
Tsara ny manamarika eto ny fanazavana nohavaozina naroson'i Bat-Galim Sha'ar (renin'i Gil-ad XNUMX) momba ny foto-kevitra momba ny 'fitiavana maimaim-poana'. Araka ny filazany, ny 'fitiavana maimaim-poana' dia 'ny fitiavan'izy ireo ny fahasoavana'. Ny fitadiavana ny lafy tsaran-javatra amin'ny hafa - dia mety hanaitra ny fitiavana manjavona ary manome aina ny fifandraisana.
Ary mazava ho azy fa misy ifandraisany amin'ny tenin'i Rabbi Nachman avy any Breslav ao amin'ny Torah Rafev momba ny 'Mihira ho an'i Elki raha izaho', rehefa mifaly amin'ny 'mihoatra kokoa', amin'ny tsipìkan'ny tsara, na ny marina kokoa: ny kely izay. toa tavela ao amin'ny olombelona - ary 'ny fahazavana kely - mandroaka ny ankamaroan'ny haizina'.
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 amin'ny 17:XNUMX
Hazavain'ny raby amiko ny maha-samihafa ny fitiavana ara-pihetseham-po sy ny filan'ny nofo izay tsy tsapako.
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 amin'ny 42:XNUMX
Tsy azoko ilay fanontaniana. Tsy misy ifandraisany amin'ny teniko ny fanavahana ireo fahatsapana roa ireo. Eken’ny rehetra fa tsy mitovy izany. Fihetseham-po roa samy hafa ireo. Ny filana dia faniriana haka zavatra, ho ahy. Ny fitiavana dia fihetseham-po izay ivon'ny hafa fa tsy izaho (centrifugal fa tsy centrifugal). Navahako teto ny emotion sy perception (fitiavana ara-tsaina sy ara-tsaina).
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 amin'ny 37:XNUMX
"Fa raha ny fitiavana no vokatry ny fisainana ara-tsaina fa tsy ny fihetseham-po fotsiny, dia misy toerana hibaikoana azy."
Fa na izany aza, ahoana no azo anampiana ahy hahatakatra zavatra ??? Raha hazavainao amiko ary mbola tsy azoko na tsy ekeko dia tsy fahadisoako izany!
Sahala amin'ny fiarahana amin'ny olona niaina tamin'ny taonjato faha-10 mba hahatakatra ny modely heliocentric, raha azony ny fahasalamana fa raha tsy inona no tokony hatao!
Raha tsy milaza ianao fa ny mitzvah mba hahatakatra an'Andriamanitra dia midika farafaharatsiny miezaka hahatakatra ary raha tsy azonao dia tsy mahatsiravina ianao dia voaolana
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 amin'ny 43:XNUMX
Tsy maintsy mandinika ilay raharaha ny mpiasa mandra-pahazoanao azy. Ny fiheverana dia hoe rehefa azonao ilay zavatra dia ho tianao izany. Raha tsy tafita ianao dia voaolana.
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 amin'ny 43:XNUMX
Ary fanontaniana iray hafa: ahoana no fitazomana sy hitiavanao ny namanao tahaka ny tenanao raha fitiavana ara-tsaina, inona no tokony ho takatra eto?
Tsy maintsy takarina ny dikan'ny hoe rahalahinao avy amin'ny Isiraely. Ny fahatakarana fa karazana fianakaviana ny olona iray (ao anaty fianakaviana dia voajanahary izany).
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 amin'ny 51:XNUMX
Ny filazana ny asan'ny zavatra eo anoloany ve dia fanambarana momba ny taolany? Ohatra, ny filazana fa ny latabatra dia "zavatra ahafahana mametraka zavatra eo amboniny" dia singa iray amin'izany sa taolany?
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 amin'ny 44:XNUMX
Heveriko fa endri-javatra izany. Angamba koa anisan'ny hevitry ny latabatra amin'ny ankapobeny. Fa raha mifandray amin'ny latabatra manokana eo anoloako dia singa iray amin'izany.